Akụkọ - CNC lathe nhazi na-egweri ihe ndị bụ isi
CNC lathe nhazi egweri ihe ndị bụ isi e ji mara
CNC lathe nhazi egweri ihe ndị bụ isi bụ:
1.Igba egweri dị elu. Egweri wheel ikwu na workpiece maka elu-ọsọ adiana, na-emekarị wheel ọsọ apụghị 35m / s, banyere 20 ugboro nkịtị ngwá ọrụ, igwe nwere ike inwe a elu metal mwepụ ọnụego. Na mmepe nke-egweri ọhụrụ technology, ike nke-egweri na-eme ka inwekwu ọganihu, na ụfọdụ Filiks dochie atụgharị, -egwe ọka, planing, kpọmkwem site ike ike nhazi.
2.Can nweta oke nkenke nkenke nkwekorita na nkenke ihu ala. Onye ọ bụla abrasive ọka cutoff na mgbawa oyi akwa bụ ezigbo mkpa, na-emekarị nwere ọtụtụ microns, otú ahụ ka ọdịdị nwere ike inwe elu nkenke na ala elu roughness. Ọ na-abụkarị ihe ziri ezi ruo IT6 ~ IT7, ike ihu ala na-eru to08-0.051xm; akwa nkenke egweri nwere ike nweta elu.
3.Cutting poweris buru ibu, na-ewe ike dị ukwuu. Igwe na-egweri igwe mejupụtara ọtụtụ lathes abrasive CNC, nkesa nke mkpụrụ abrasive na wheel na-egweri bụ ọgba aghara, na-ebelata ọtụtụ ihe na-adịghị mma (-15 '- 85'), ọnụ ya nwekwara otu okirikiri Arc radius, ma si otú ahụ belata ike dị ukwuu, igwe na-ewe ike dị ukwuu.
4.Wideprocessing nso. Egweri wheel abrasive nwere nnukwu ekweghị ekwe, kwes kwụsie ike, ọ bụghị nanị na a ga-esichara na-abụghị obi tara mmiri ígwè, igba ígwè na ndị na-abụghị ferrous ọla na ihe ndị ọzọ, ma na-ike nhazi obi tara mmiri, nile di iche iche nke ịcha ngwaọrụ na ike igwe ngwaọrụ dị ka elu ekweghị ekwe ihe.
5.High mgbanwe. Mgbanwe nke ngwanrọ ngwanrọ nwere ike dochie anya n'ime usoro ụfọdụ site na nhazi nke otu akụkụ na nhazi nke akụkụ ọzọ, nke na-ebelata nrụzi akụrụngwa na oge nkwadebe mmepụta.
6. Mezue ọrụ igwe na usoro nke akpaaka.
Wuxi Lead nkenke Machinery Co., Ltd na-enye ndị ahịa nha niile nha zuru oke ọrụ igwe na-arụ ọrụ pụrụ iche.